Chirwere - Shijiazhuang Yiling Hospital
The kupfuura nevamwe kunzwisisa chirwere kubatana RUBATSIRO RUNOTARISA pfungwa uye yokukakavadzniswa pfungwa. TCM Inoona munhu yose. Nokuti chirwere, hazvisi chete kubva chirwere pacharo, asiwo kubva yose muviri yevanhu. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kuti awane chinokonzera chirwere.
Tikafunga zvetsika Chinese mushonga uye ano yokumadokero mushonga ndiye kusangana yose uye kongiri. Tikafunga macroscopic uye nemaziso kunosanganisira kubatana uye dialectics. Ndicho zvikuru kunobatsira kuti muviri womunhu kuti apore.
Kunyanya kenza, tsandanyama atrophy, gwenya dzouropi chirwere, scleroderma, rheumatism, fibromyalgia, chirwere cheshuga, hosha yeitsvo, mubatanidzwa zvetsika Chinese uye Western mushonga kurapwa, mamirire zvetsika Chinese mushonga kurapwa, mugumisiro zvikuru chinokosha.
Kana uchida kuziva kuti zvetsika Chinese mushonga anobata chirwere chako uye sei chokubatanidza zvetsika Chinese mushonga chete rokumadokero mushonga kubata zvirwere. Bvunza nyanzvi kana kutisiya mashoko.